0	https://www.youtube.com/watch?v=dVRhRzE_AkQ ဖိုမ သဘာဝ	ချစ်တင်းနှီးနှောစဉ် အမျိုးသားများ ပြုလုပ်တတ်သည့် အမှားများ (အမျိုးသမီးများ မဖတ်ရ)	Admin	Mar 15, 2017
0	ဘယ်ယောကျာ်းလေးကမှ ကိုယ်နဲ့ ချစ်တင်းနှီးနှောမယ့် ကောင်မလေးကို စိတ်ပျက်သွားအောင်၊ စိတ်ဝင်စားမှုလျော့သွားအောင်…	လူမှုဘဝနှင့်ဗဟုသုတအစုံ	ရေအကျိုး ၁၀ ပါး	Admin	Mar 15, 2017
0	ရေအကျိုး ၁၀ ပါးကို အားလုံးကြားဖူးကြမှာပါ။ အောက်ပါရေအကျိုး ၁၀ ပါး ကိုလဲ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ ၁။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို…	ရုပ်သံဗီဒီယိုများ	ရည်းစားနဲ့ နှစ်ယောက်တည်း ချိန်းတွေပြီး အားအင်တွေ ရှိနေရင် ဘာလုပ်မလဲ	Admin	Mar 15, 2017
0	ရည်းစားနဲ့ ချိန်းပြီး အားအင်တွေ ရှိနေရင် သင်ဘာလုပ်မလဲ? ဒီအတွဲ ဘာလုပ်လဲ သိချင်ရင် အဆုံးထိ ကြည့်နော်...…	ဖိုမ သဘာဝ	ချစ်တင်းနှောတဲ့အခါ သူမအကြိုက်ဆုံး ပုံစံ သိအောင် လုပ်နည်း ၅ ခု	Admin	Mar 14, 2017
0	ချစ်တင်းနှောတဲ့အခါ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်နားလည်မှု နဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အပေးအယူမျှဖို့ အင်မတန် အရေးကြီးပါတယ်။…	ဖိုမ သဘာဝ	သင်မသိသေးတဲ့ အမျိုးသမီးများ တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်းဖြင့် ရရှိလာမည့်…	Admin	Mar 14, 2017
0	တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်းကို ယောကျာ်းလေးတွေ ပိုပြောကြပေမယ့် မိန်းကလေးတွေလည်း လုပ်ကြ ပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာ ရှိတဲ့…	ရုပ်သံဗီဒီယိုများ	မိန်းကလေးတွေ ယောကျာ်းလေးရဲ့ အဓိကနေရာကို ကြည့်တတ်ကြသလား??	Admin	Mar 14, 2017
0	ဘုရားပေါ်မှာ ဖိနပ်စီးတဲ့ tourist2ယောက် ပြောမရပါဘူး မြင်းကပါရပ်က ကောင်မလေး ၂ ယောက်လဲ ဝင်ပြောတယ် မရဘူး ဘယ်ကလဲ…	ရုပ်သံဗီဒီယိုများ	မိကျောင်းနဲ့ ကျားသစ်တို့ရဲ့ အစာလုပွဲ အသေအကြေတိုက်ခိုက်	Admin	Mar 14, 2017